Posted by ညီလင်းသစ် au 17.6.11
ပန်းတွေက လှလွန်းလို့ ဘာရေးလို့ရေးရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ ခရမ်းနက်ရောင်လေးနဲ့ အနားဖွာနေတဲ့ ပန်းလေးတွေကို မမြင်ဘူးသေးဘူး။ မျိုးစပ်ပြီးမှ စိုက်တာလားမသိဘူးနှော်။
ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ၊ သဘာဝပန်းတွေရော မျိုးစပ်ယူတာတွေရော အစုံပါပဲ၊ ကျနော်လည်း ရိုက်ကူးရေးမှာ ရှုပ်နေလို့ ပန်းအမျိုးအစားတွေနဲ့ သမိုင်းကိုတောင် သေချာ မဖတ်လိုက်ရဘူး..၊း)
တော်တော်လှတယ် လေပြေနဲ့အတူ ယိမ်းနွဲ့သွားတဲ့ သူတို့အလှက ရောင်စုံဂါဝန်လေးတွေဝတ်ထားတဲ့ ပျိုဖြူလေးတွေနဲ့တူပါ့ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတယ်။
ကျနော်တော့ အဲ့ပန်းမျိုးလေးတွေ အပြင်မှာမမြင်ဖူးသေးဘူးဗျ။
ရော တော်ပါတယ်ဆိုနေမှ :)
အ၀ါရောင် ပန်းလေးတွေ ယိမ်းနေတာက
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ခွင့်က နောက်နှစ်တပတ် သို့ ၁၀ရက်
သယ်လို့မရဘူးလား။ ဒီမှာတော့ရတယ်။ လန်ဒန်က ကျမ မောင်လေးလည်းပြောတယ် ဧပရယ်လ် ဆို နောက်ဆုံးပဲတဲ့ အပြီးသုံးရတယ်ဆိုပဲ ဆိုးတာနော်။
Yes! You are right.Your tulips are dancing with the breeze.I went there twice and the wind was calm abit. My da da took video aspecially their names and hybrid year cos i'm interested in.I was model to take pictures as usual:)I like the music in your video.Do you play cello....mr. little tusk?
Ko Nyi missaplace to take video that onalittle hill plant different flowers making shape of dancing lady.Her robe flying around her thighs.It's so lovely that I took photo imitating these flowers.
လှလိုက်တဲ့ပန်းကလေးတွေရယ်... အဲဒီနားမှာ တနေကုန်သွားထိုင်နေချင်စိတ်ပေါက်မိတယ်....
လေညင်းသွဲ့သွဲ့မှာ ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ အသွေးအရောင်စုံ ပန်းလေးတွေရယ် ... ချိုချိုမြမြ ဂီတသံစဉ်ရယ် ...
ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ ကဗျာတပုဒ်ကို ဖတ်ရသလိုပဲ တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ ... မိုက်တယ် ကိုညီလင်းသစ် ... ။ အရမ်းလှလို့ ၂ ခေါက်ပြန်ကြည့်သွားတယ်။ တချို့ပန်းအမျိုးအစားတွေ မမြင်ဖူးသေးဘူး။
ပန်းလေးတွေက လေအသွဲ့မှာ သေမနေတော့ဘူး....။
Yellow, red, white so many colourful and beautiful tulips. Background music is nice too. Love the video.
အင်း ရွှေပြည်ကြီး က ဆိုတော့ ကြည့်မသွားနိုင်ဘူး ကိုညီလင်းသစ် ရေ
Canon 5D mark II ကျနော့်ကိုအလဲထိုးသွားပြီဗျာ.. :D
ပန်းတွေက လူတွေကို ပြုံးနေစေမှာပဲ။
ရိုက်တဲ့သူကလည်းတော်လိုက်တာ....ပန်းတွေကလည်း လှလိုက်တာ ကြည့်မဝဘူး၊ ၂ခါပြန်ကြည့်သွားတယ်။
Whatabeautiful place to visit and those tulips are amazingly beautiful!!! I wish I could visit there sometime too.
Tulip is one of my favorite flowers. I love its shape. I even used my wedding invitation card with Tulip.
Your creation is amazing. Will be back to see it again.
ဟုတ်တယ် ကျွန်မလဲ ကျူးလစ်ကို အနှစ်သက်ဆုံးပန်းထဲမှာ အပါအ၀င်အဖြစ်ထည့်ထားတယ်
သိပ်လှတာဘဲ သူလှပုံက တစ်မျိုးလေး အရောင်အသွေးကလည်းစုံလွန်းတယ်
ကိုညီလင်းသစ် ဗီဒီယိုထဲက ကျူးလစ်လေးတွေ လေယူရာသိမ်းနေပုံများ နွဲ့နွဲ့ညင်သာ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ အပြင်မှာတွေ့လိုက်ရရင်အသက်ရှုမှားလောက်ရဲ့
အကိုရဲ့ ဖန်တီးမှုကြောင့် ပန်းလေးတွေရဲ့ လှပမှုက ပိုလို့ အသက်ဝင်သွားတယ်ထင်ရတယ်....ကျေးဇူးပါအကို...
ကျေးဇူးပါပဲ ညီရေ၊ တနေ့နေ့တော့ မြင်ခွင့်ကြုံမှာပါဗျာ..၊
ခွင့်က နောက်နှစ်အထိကို ၂ ပတ်၊ ၃ ပတ်၊ ၁ လ ကြိုက်သလောက် သယ်သွားလို့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်နှပတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. ဧပြီလ ကျော်သွားရင်တော့ အားလုံး ပျက်ပြယ်ပြီးသားလို့ မှတ်ယူကြပါတယ်..၊
ဂျီးဒေါ်က ကျူးလစ်ကို ဒီလောက် စိတ်ဝင်စားမှန်း မသိဘူး၊ ချယ်လိုက ကျနော်အရမ်း ထိုးတတ်ချင်တဲ့ ဂီတ ပါပဲဗျာ၊ အခုချိန်ထိလည်း အခွင့်ရရင် သင်ချင်နေ တုန်းပဲ၊ ဂျီးဒေါ်ပြောတဲ့ တောင်ကုန်းလေးကိုတော့ တခါမှ သတိမထားမိဘူး၊ ရှိမှန်းတောင် မသိဘူး...၊ ဆိုတော့ နောက်တခါ ထပ်သွားရဦးမှာ ပေါ့ဗျာ...၊း)
ဟုတ်ကဲ့..၊ ကျနော်ကတော့ ပန်းခင်းထဲ လျှောက်ရိုက် တာ များလို့ ခြေထောက်တွေ ညောင်းလာခဲ့တယ်..၊း)
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်နော်၊ အခုနောက်ပိုင်း ကဗျာရေးဖို့ ဦးနှောက်က ကျပ်ခဲနေတာ ကြာပြီ၊ ဒီလို တင်ဆက်မှုကို ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ဆိုလို့ တကယ်ပဲ ဝမ်းမြောက်ရ ပါတယ်...၊
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ကိုငှက်ပြောတဲ့ 'ဒါ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ပေါ့၊ ဘယ်သူငြင်းမလဲ' ကို သတိရသွားတယ်၊း)
ကျေးဇူးပါနော်၊ ကျူးလစ်တွေကို နှင်းဆီက လာပြီး အားပေးတာ ပေါ့လေ...၊း)
ကျနော် တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ၊ ဗီဒီယိုတွေ တင်တိုင်း လာလည်သူတွေ အားလုံး ကြည့်လို့မှ ရကြ ပါ့မလားလို့ အမြဲ စိတ်ထင့်နေခဲ့ ရတာဗျ...၊း(
အားမငယ်ပါနဲ့ဗျာ၊ မကျေပွဲ အနေနဲ့ Nikon D7000 နဲ့ ကြိုးဝိုင်းထဲကို ပြန်ဝင်လာခဲ့ဗျာ...၊း)
ဟုတ်ကဲ့၊ တချို့ပန်းတွေက လူတွေကို ပြုံးသွားစေတဲ့ အပြုံးပန်း တွေပါပဲဗျာ...၊းP
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ဒါပေမယ့် မြို့က ကျနော့်ကို ဒါရိုက် တာအဖြစ် လာခေါ်ရင်တော့ လုံးဝမလိုက်ဘူး၊ မောင်ကြီးနှမ လက်ဆင် မိမှာစိုးလို့....၊းD
တနေ့မှာတော့ ဖြစ်မလာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး..နော၊
ကျေးဇူးပါနော်၊ Tulips ကို အရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ မအိုင်အိုရာရဲ့ someone special က "The tulips, between your nose and chin, are the most beautiful" လို့ မပြောဘူးလား?း)
အသက်ရှူမှားတာတော့ ပြောမနေနဲ့ဗျို့၊ ကျနော်လည်း အဲဒီမှာ အသက်ကို မနည်းလုပြီး ရှူနေရတယ်၊ ကင်မရာနဲ့ ထရိုင်ပေါ့ထ်က လေးလို့ မောနေတာ....၊းD
ကျေးဇူးပါ ညီမရေ၊ အင်း..ပန်းလေးတွေ အသက်ဝင်တာက တိုက်နေတဲ့ လေကြောင့်ဆို ပိုမှန်မယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ...။းD
သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့ ဂီတသံလေးကို နားဆင်ရင်း လေညှင်းသွဲ့ သွဲ့တိုက်ခတ်နေတဲ့ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးကို အကို့ ကျေးဇူးနဲ့လာလည်သွားပါတယ် :)။
C'est magnifique! En fait, j'aime bien des fleurs. J'ai aussi été pendant la fête et j'ai vu que des jolies fleurs. Mais, maintenant, j'ai remarqué qu'elles sont beaucoup plus magnifique avec ta création et musique. Bravo! :)
ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာ ၀ါသနာ ပါတယ်။ ကျနော့ ကင်နွန်လေး ပျက်သွားတဲ့နောက် သိပ်မရိုက်ဖြစ်ဘူး။ တိုးရစ်တွေ ကင်မရာလွယ်လွယ်ပြီး လိုက်ရိုက်နေရင် မနာလိုတောင် ဖြစ်တယ်။ ဟီး။
ဗူဒီယိုဖိုင်ကတော့ ကော်နက်ရှင်ကြောင့် ပြတ်တောင်းတောင်းလေးပဲ ကြည့်သွားပါတယ်ဗျာ။
မပြောဘူး၊ မပြောတော့ဘူး။ ကုိုညီလင်းသစ်ရေ။ The most complaining လို့ ဘဲပြောတော့တယ်။း))
မ San Htun ...
လာလည်တဲ့အတွက်ရော ကွန်မန့်အတွက်ပါ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်နော်....၊
Merci beaucoup pour tes gentils mots! En fait, les fleurs étaient déjà jolies elles-même et moi, j'ai essayé de révéler cette beauté autant que je peux. :)
(ကို) အလင်းစက်များ ...
ကင်မရာ ပျက်သွားတာ ကြားရလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး ဗျာ၊ ကျနော်ဆိုလည်း စိတ်ထိခိုက်မိမှာပဲ၊ ဗီဒီယိုကိုလည်း ပြတ်တောင်း၊ ပြတ်တောင်းနဲ့ ကြည့်ရတယ် ဆိုလို့ ထပ်ပြီး စိတ်မကောင်းပါဘူး၊း(
ဒါကတော့ ဒီလိုပါပဲဗျာ၊ အခြေအနေ အတိုင်းအတာ တခုကို ရောက်လာကြတဲ့အခါ သိပ်မပြောကြတော့ဘူး လေ၊ စကားလုံးတွေ သိပ်မလိုအပ်တော့တာ မျိုးပေါ့၊း) ရင်ဘတ်အောက်ခြေမှာတော့ အမြဲရှိမှာ သေချာပါတယ် ...။းD
ညီလင်းသစ်ရေ မင်္ဂလာပါ။ ကျူးလစ်ပန်းတွေဟာ သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းတွေပါပဲလား။ အရောင်အသွေးက အစုံအလင်ရှိတယ်နော်။ လေညှင်းရဲ့တေးသွား မှာ ကကြိုးဆင်နေရဲ့နော်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြည်လင်ဝင်းပ အေးမြပါစေ...
ကျူးလစ်ပန်းတွေဖွင့်ကြည့်တုန်းသားက နောက် ကနေ “မာမား ဘာလုပ်နေတာလဲ”
“ပန်းကြည့်နေတာ” လို့ဖြေတော့ ၊
“ အဲဒါပန်းမဟုန်ဘူး ကျူးလစ်လို့ခေါ်တယ်” တဲ့။
ပြီးတော့ သူက ဒီဘလော့ဂ်ကိုဘာကိုကြည့်ပြီး မှတ်မိနေလဲမသိဘူး “ မာမား ခလေးလေး အိပ်နေတဲ့ ပုံကြည့်မယ်” ဆိုပြီတောင်းဆိုတော့တာပဲ။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း ပထမတစ်ခါကြည့်ပြီး ကော်မန့်မရေးခဲ့ရဘူး။
ကိုညီလင်းသစ်ရေ သိပ်ကိုလှတဲ့ ပန်းတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ။
(ကျွန်မပဲ ကိုညီလင်းသစ်ဆီက ပန်းစည်းရထားသလိုလို ........)
ဦးဇင်း တောက်ပကြယ်စင် ...
လာလည်တာ ကျေးဇူးပါ ဘုရား၊ ဦးဇင်းလည်း ကျန်းမာပြီး အဆင်ပြေပါစေ..၊
သားလေးက တယ်တော်ပါလား၊ ကျူးလစ်တွေတောင် သိနေပြီ၊ သူ ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကို မှတ်ထားတဲ့နည်းလေး သဘောကျသွားတယ်၊ ဥာဏ်ကောင်းမှာလည်း သေချာတယ်၊ နောက်ဆုံး ကျေးဇူးတင်စကားအပြီး ကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲမှာ ရေးတဲ့ စာကြောင့် ရီနေရပြန်ရော..၊ မ,ကောင်းမွန်က Sense of humour တော်တော် ရှိပုံရတယ်...။းD
Visited and enjoyed your beautiful relaxing footage.
စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ နော်။ သဘောကျလွန်းလို့desktop မှာခဏတင်ထားတယ်။ ခွင့်ပြုပါနော်။
အို.. ဒီလို လွယ်လွယ်နဲ့ ဘယ်ရမလဲ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း များများပါတဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော် တစ်ပွဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ငရုတ် သီးစိမ်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဓါးပြားရိုက်ပါတဲ့ ကန်စွန်းရွက် ကြော်တစ်ပွဲ နဲ့ လဲမှ ရမယ်... အဟဲ၊ (ခင်ခင်မင်မင် နောက်တာပါဗျာ၊ ခဏပဲတင်တင် အပိုင်ပဲတင်တင် သဘောရှိပါ...)။းD
နှစ်ပွဲလုံးပို့ လိုက်မယ်။ စောင့်နေ။း)
ရိုက်ထားတာ မိုက်လိုက်တာ။ ကျွန်တော့် ကင်မရာလဲ HD ရိုက်လို.ရတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် အရမ်းကြီးတာရယ်။ edit လုပ်တာ အချိန်အရမ်းတာရယ်ကြောင့် ဆိုဒ်မှာ မတင်ဖြစ်ဘူး။ Movie make ပဲသုံးတက်တော့ အစ်ကို ဗွီဒီယိုလောက် မလန်းဘူး။း)
ohhh....thanks u for sharing..
i really enjoy and love it..
တလောက အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ခုမှပဲအေးအေးဆေးဆေး လာကြည့်ဖြစ်တော့တာ
သိပ်တော်တဲ့ ကင်မရာမင်းရဲ့ သိပ်လှတဲ့ ရိုက်ချက်တွေရယ်... သိပ်လှတဲ့ ကျူးလစ်ပန်းတွေရယ်...း))
Double Tardive ဆိုတာ နှစ်ရောင်စပ်နေတဲ့ ပန်းတွေကိုများ ပြောတာလား မသိ...
ပို့လိုက်၊ ပို့လိုက်...၊ ဒီက စောင့်နေသူ xxx ဝိုးအို့ xx စောင့်နေသူ..၊း)
HD ရတော့ ကောင်းတာပေါ့၊ မရိုက်ချင်မှသာ နေရော၊ လိုတဲ့အခါ အဆင်သင့်ပဲ၊ ဖိုင်ဆိုဒ် ကြီးတာတော့ အမှန်ပဲဗျို့၊ Edit လုပ်ရင်လည်း ကွန်ပြူတာကprocesser ကောင်းကောင်းနဲ့မှ ပိုအဆင်ပြေချင်တာ..၊
Thanks you for your appreciation...!
အဲဒါကြောင့် မတွေ့ပါလားလို့ စဉ်းစားနေတာ..၊ ကျေးဇူး ပါနော်...၊
မသက်ဝေကိုတော့ Raclette ဖိတ်ကျွေးဖို့ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိနေပြီ၊း) Double Tardive ဆိုတာ မသက်ဝေ ထင်သလိုပဲ ဟုတ်မယ် ထင်တာပဲ၊ ကျနော်လည်း သေချာမသိဘူးဗျ...၊း)
အိုးးး.... လှလိုက်တဲ့ပန်းတွေ တစ်ခါမှ အဲဒီလောက် အသွေးအရောင်စုံတာ မတွေ့ဖူးပါဘူးရှင်။ ကျူးလစ်ဆိုလို့ ပန်းဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့ အဖြူ အ၀ါ အနီလောက်ဘဲတွေ့ဖူးတာ။ အပင်တောင်မမြင်ဖူးဘူး။ ဗွီဒီယိုလေးတင်ပေးတာ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ အဲဒီလို ပန်းဥယျာဉ်မျိုးထဲ တသက်မှာ တခါလောက်ရောက်ဖူးရင်ကို သေပျော်ပါပြီ...
အဲဒီလောက်တောင်လားဗျာ...၊း) ဖြစ်နိုင်ရင် ပန်းတွေကို ချစ်တဲ့သူတိုင်း ပန်းတွေအလယ်ကို ရောက်စေချင်ပါတယ်၊ အခုလို ခံစား၊ အားပေးသွားတာ ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော်...။
ရွှေပြည်ကြီးကတော့ ဇာတိကစပြလာပြီလေ :)
နည်းနည်း ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်း ဖြစ်လာပြီ
ဒါပေမယ့် အဲဒါလေးကိုပဲ ရအောင်ထိုင်ကြည့်နေတယ်
ပန်းလေးတွေကို နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်နဲ့ကော..
လေအသွဲ့မှာ ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ သဘာဝမြင်ကွင်းကို သဘောကျတဲ့ စိတ်နဲ့ကော
အဲလိုနေရာမျိုးမှာ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ အေးအေးလူလူထိုင်ခွင့်ရချင်ပါရဲ့
ဘာသီချင်းမှ မပါတဲ့ တေးသွားငြိမ်ငြိမ်လေးကိုပဲ နားထောင်ရင်းလေ :)